ज्यामिरगढी नाका तस्करीको अखडा ,सशस्त्र प्रहरीको वीओपीले रोक्ला ?::अनुसन्धान अनलाइन डटकम
भ्mापा ।। अनुसन्धान डेक्स
पूर्वी नाका मेचीमा पर्ने ज्यामिरगढी नाका बाट हरेक रातको समय अवैध रुपमा सामान ओसार प्रसार हुने गरेको छ । रातको समय हुने अवैध तस्करी हुन प्रहरी प्रसासनको साथ बिना कुनै तस्करलाइ सम्भव हुने कुरै होइन ।
ज्यामिरगढीका एक स्थानीय नाम नबाउँने सर्तमा भन्छन राति ११ बजेपछि बोरा बोकेर कुद्नेको लाइभ देख्न सकिन्छ । तर यो चलिरहँदा समेत कुनै निकाय रोक्न लागेको देखिन्न । उल्टै समान छुटाउँन राम्रो लाइन(सेटिङ्ग) मिलाउँने गरेको स्रोत बताउँछ ।
मेचीनगर १५ ज्यामिरगढीका बिभिन्न क्षेत्रबाट रातको समयमा भारतबाट मोटर पार्टस,लत्ताकपडा,रजनीगन्ध,मोबाइल ,गोरु लगायतका सामानहरु खोला बाट नेपाल ल्याउँने गरेका छन । यसरी सामान ओसार्न पहिले केरियारले १५ प्रतिशत कमिसन पाउँने गरेको अहिले लकडाउँनमा बढेर २५ प्रतिशत पुगेको रातको समयमा तस्करको सामान ओसार्ने एक केरियारको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरी,जनपथ प्रहरी यि यस्त गतिबिधी रोक्न भन्दा प्रोत्सहान दिन लागि परेको देखिन्छ ।
ज्यामिरगढी,सतिघट्टामा नेपाल प्रहरीको चौकी छ ।तर तस्करको बाटो तिनै हुने गरेको छ । यता सशस्त्र प्रहरीले समेत ड्युटिमा खटाएको छ । तर तस्करले ५ सय देखि माथि रकम दिए तस्करको सामान छोड्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
विओपीले तस्करी रोक्ला ?
चालुु आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले झापामा आठवटा वीओपी वोडर आउट पोस्ट स्थापना गर्ने लक्ष्य लिए अनुसार विहीबार झापाको मेचीनगर— १५ स्थित ज्यामिरगढीमा वीओपी वोडर आउट पोस्ट स्थापना गरेकोे छ ।
यसअघि कचनकवल —५ पाठामारीमा वीओपी वोडर आउट पोस्ट खडा गरेकोे छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा जिल्लामा दुईवटा सशस्त्र प्रहरीको वीओपी वोडर आउट पोस्ट स्थापना गरेकोे छ । पोष्टको बिहिवार उद्धघाटन समेत भयो । ज्यामिरगढीसहित जिल्लामा वीओपीको संख्या ११ पुगेको छ । सीमाक्षेत्रमा हुने अवाञ्जित गतिविधि नियन्त्रण र सीमाको उचित व्यवस्थापन हुने विश्वास व्यक्त भएपनि यसरी रातको समयमा हुने तस्करी रोक्न नसक्दा प्रहरीको काम प्रति बिश्वास घट्दै गएको छ ।
झापाकोे १ सय ४४ दशमलव २ किलोमिटर क्षेत्रफ खुला सीमा रहेकाले विभिन्न खालका आपराधिक तथा तस्करी गतिविधि हुने हुँदा यस्ता वीओपी स्थापना गर्दा यस्ता गतिविधि रोक्न ठूलो भूमिका हुन्छ । तर,आखा अगाडी अवैध गतिबिधी हुँदा समेत मौन रहने प्रहरीकै कारण संगठनको गरिमा माथि आच आउँने कुरामा चाहँी सोच्नै पर्ने देखिन्छ ।